Indlu yase-Deepwater Beach
Iphupha kunye negumbi elisecaleni lamanzi elisecaleni kwendlu enamagumbi amabini okulala elunxwemeni. Bukela ukuphuma kwelanga ukusuka kumgangatho ongaphambili, Yonwabela igrill yeBBQ egcwele iinkuni kunye nentshayi. Thatha isikhephe sakho sentlanzi, phumla ebhedini yosuku kwaye wonwabele izilwanyana zasendle zale ndlela yokubalekela ikhethekileyo neyabucala.
Ifanelekile izibini kunye neentsapho / amaqela okanye ukuhlala ixesha elide
Min 3 iintsuku, izaphulelo ngeveki
Amaphepha e-BYO, iitawuli kunye netawuli yasekhitshini.
Kulala abantu aba-6 - iibhedi ezi-2 zokumkanikazi kunye nee-singles ezi-2.
Thatha inkunkuma yakho uhambe nayo
QAPHELA AMANZI, amanzi etanki kuphela.
Undoqo wale propathi ubonwa kumgangatho, ujikeleze indawo yomlilo kwaye ukonwabela amanzi abanzi. Yiba ne-BBQ kwindawo yangaphandle okanye upheke kwindawo yokutshaya. Iveranda ineebhedi zeentsuku ezi-2 kwicala ngalinye, jonga iikhangaru ziqokelelana ngorhatya. Ishawari eyongezelelweyo eshushu/ebandayo yangaphandle ngasemva kwendlu iyamangalisa phantsi kweenkwenkwezi.
Igumbi lokuhlala elivulekileyo kunye nekhitshi elineTV ebekwe eludongeni. Ikhitshi eligcweleyo liphakamise itafile yokutyela enezitulo, iTV, imidlalo yebhodi kunye neencwadi ezahlukahlukeneyo. Igumbi elinye lokulala likhulu elinebhedi enkulu kunye nebhedi etyebileyo, engumqamelo, iibhedi ezinkulu kunye nebhedi ephantsi. Igumbi lesibini linebhedi enkulu kunye negumbi lokugcina.
Ukugqunywa kwefowuni okulinganiselweyo kwiindawo ezithile ezijikeleze indlu, njengethambeka lephenyane, kodwa akukho kwamkelwa ngaphakathi endlwini.
I-Broadwater ye-Deepwater Creek yipokotho encinci eyimfihlo yendawo yaseBaffle Creek. Yinkqubo yomlambo exineneyo nebukekayo enemijiko emininzi kunye neepokotho, intle ngokumangalisayo kwaye ayinzulu kakhulu kwiindawo ezininzi ngaphakathi kwe-1km ukusuka emlonyeni womlambo! Ukusebenzisa umlomo womlambo njengofikelelo kulwandlekazi oluvulekileyo AKUMELEKANGA kwaphela njengoko kukho ifestile encinane kakhulu kumaza olwandle xa kusenzeka (ngokungafane kwenzeke).
Kuba yindawo ekude neyodwa, siyimise ngolu hlobo lulandelayo:
-I-BYO LINEN-Yiza namaphepha akho, iitawuli zaselwandle, iitawuli zesitya njl.
– Yiba nobulumko AMANZI, amanzi etanki kuphela.
– BYO konke ukutya kunye neziqholo.
– BYO okanye uqokelele iinkuni kwindawo ezingqonge ipropati.
-I-BYO yelanga, i-mozzie yokugxotha njl
– UMLILO kufuneka ucinywe ngaphambi kokuba ulale nangaphambi kokuba ushiye ipropati. Namathela kwizithintelo zomlilo zasekhaya.
- Thatha inkunkuma nawe. Asinayo inkonzo yomgqomo.
- Jonga ixesha longezwe ukuvumela ukupakisha kunye nokucoca.
- Qokelela inkunkuma kuzo zonke iindawo ezingaphandle.
- Shiya i-BBQ kunye nentshayi ikwimeko efanelekileyo ukuba isetyenziswa.
- Galela amanzi emlilweni.
- Lahla iintlanzi kunye nezidumbu zoononkala ngokucingisisayo.
- Umcoci wethu ulindeleke ukuba enze iiyure ezimbalwa zokulungiselela iindwendwe ezilandelayo ukuba kutheni sibiza umrhumo omncinci wokucoca.
-Iyafumaneka ukuba isetyenziswe kwiindwendwe ezisengozini.
- Kufuneka asebenzise iibhatyi zobomi ezibonelelwe phantsi kwebhedi yemini.
- Nceda uphathe musa ukutsalela iiKayaks elunxwemeni.
- Zibeke kakuhle ngaphezu komgca wamanzi ukuze umsinga ungawasusi
- Hlala kwindawo yendawo
- Jonga ama-stingrays
- Izinja kuphela.
- Hayi endlwini.
- Makungaleqi izilwanyana zasendle.
- Ulwandle ngaphesheya kwe-Broadwater yindawo yokuzalela ufudo. Ngamanye amaxesha iiPaki zeSizwe zibeka izithiyelo ezinetyhefu kwindawo enemithi emantla ukuze izinja zasendle zingawathathi amaqanda ofudo. Ukuba uthatha inja yakho ukuya apho kwaye uhambe uhambo olunyukayo elunxwemeni yilumkele oku kwaye ungabavumeli ukuba babhadule kude kakhulu ukuya ematyholweni. Zange ndibenangxaki kodwa yinto ekufuneka uyiqaphele.
- Inkqubo ye-Broadwater ihamba kakhulu kwaye isanti ihlala iguquka.
- Ukundululwa nokubuyiswa kukwizandi eziphezulu kuphela, isanti enomsinga isoloko ithambe.
- kunzima kakhulu ukuwela ibha, ukuya kunzulu
Enkosi ngokufunda nokulandela imigaqo.
Yiba nexesha elimnandi!
Ngokwenene yindawo ekhethekileyo.
IRules Beach kunye ne-Deepwater / indawo ye-Baffle Creek yindawo ethule kunye nesemaphandleni encinci yeparadesi kuMbindi weQueensland. Idume kubakhenkethi ngenxa yemo epholileyo kunye neelwandle ezitshiziweyo ze-driftwood kunye nemilambo. Kulula kakhulu ukufumana indawo engenamntu kwaye ukuloba kunye nokuhamba ngesikhephe kulungile.
I-Deepwater National Park -
Thatha uhambo losuku ukuya eAgnes Water ngendlela ebukekayo yobumdaka kunye nengoma yesanti. Misa kwiLiwa eliNgxaki, eliLitye eliMbindi okanye kwiLitye eliFcaba ukuze uqubhe endleleni kwaye ukuba unethamsanqa usenokubona i-emu!
I-Deepwater National Park yi-4WD kuphela.
Baffle Creek -
Idume ngokuloba i-Baffle creek yinkqubo yomlambo enkulu kwaye intle 10 imizuzu phantsi kwendlela. Yonwabela isidlo sasemini kwindawo yepikniki yeFlat Rock okanye uhambe umlambo ngephenyane lakho. Kukho iindlela ezi-2 eziphambili zesikhephe enye eFlat Rock kufutshane nomlambo kunye nomnye umlambo ongaphezulu kufutshane neSikolo saseWartberg.
Ivenkile yaseBaffle Creek-
Fumana igrosari yakho, i-petroli, isithiyelo kunye nezixhobo zokuloba kwiVenkile yaseBaffle Creek, ivala ngentsimbi yesi-6pm.
Zama ibhiya yasekhaya evela eBaffle Beer Brewery kwindawo yentengiso ‘Zincalumbar’. Umoya onobubele kunye nebhasi yeCourtesy ngeempelaveki.
I-Wreck Rock Cafe-
Le gem efihliweyo ixabisa uhambo nje ngepizza. Banikezela ngeebhega kwaye bathathe ukutya kwendlela. Iibhega zininzi. Bakwanayo ne-ayisikrimu, iisoda, isonka segalikhi kunye nokunye.
izitshixo kwiibhokisi ezingundoqo